कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ, अम्बाको पातलाई यसरी प्रयाेग गर्नाले - यस्ताे छ प्रयोग गर्ने तरिका !
कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ, अम्बाको पातलाई यसरी प्रयाेग गर्नाले – यस्ताे छ प्रयोग गर्ने तरिका !
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। अम्बाको पातलाई यसरी प्रयाेग गर्नाले कपाल झर्ने समस्याबाट छुटकारा मिल्छ, यस्ताे छ प्रयोग गर्ने तरिका ! अम्बाको प्रयोग गरी कपाल झर्ने समस्याबाट मुक्ति पाउने प्राकृतिक उपायबारे यस्ताे छ जानकारी ।
यसले तपाइँको कपाललाई बढाउनमा पनि मद्धत पुर्याउँदछ । यस समस्याको समाधानको लागि अम्बाको पात धेरै नै राम्रो उपाय मानिन्छ । बैज्ञानिकहरुको अनुसार अम्बामा भिटामिन -बी- तत्व प्रचुर मात्रामा पाईने भएकोले यसले कपाल झर्ने समस्यालाई रोकि कपाल बढ्नमा सहयोग गर्दछ । यस्ताे छ प्रयोग गर्ने विधि:-
एउटा भाँडोमा पानी हाली त्यसमा अम्बाको पातलाई राखेर उमाल्नुहोस् । त्यसपछि यस मिश्रणलाई चिसो हुन दिनुहोेस् र चिसो भएपछि आफ्नो कपालमा राख्नुहोस् । यसपछि कपाललाई सफा पानीले पखाल्नुहोस् । राम्रो परिणामको लागि सुत्नुभन्दा अगाडि यसको प्रयोग गर्नुहोस् ।
यो कपाल झर्ने समस्याको लागि धेरै नै राम्रो उपाय हो । यसले कपाललाई जरैदेखि बलियो र बाक्लो पनि बनाउँछ । मानिसहरु कपाल झर्ने समस्याबाट छुट्कारा पाउन महङ्गा आैषधिहरुको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तसर्थ यसको प्रयोगले तपाइँको पैसा र समय दुबै बचत हुन्छ । त्यसैले अम्बाको पातको प्रयोग गरी आफ्नो कपाललाई बाक्लो र आर्कषक बनाउनुहोस् ।
रोकिएको कोरोना खोप पुनः सञ्चालन स्वास्थ्यकर्मी कुटिएपछि
सुन्दै अचम्म लाग्दाे, एउटै औषधिको मूल्य २५ करोड !